Sabotsy 05 Jiona 2021 – FJKM
Sabotsy 05 Jiona 2021
Ho fampaherezana ireo kristiana niharan’ny fanenjehana , ho fampaherezana ireo kristiana niezaka nijoro ho vavolombelon’i Jesoa tamin’ny fotoan-tsarotra no antony nanoratan’i Jaona ny Apokalypsy . Ny tanjona tamin’izany dia ny hampahafantatra fa i Jesoa , izay ninoan’izy ireo dia efa nandresy teto amin’izao tontolo izao , ka manjaka ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra . Jesoa Zanak’Andriamanitra dia :
1-Mahalala tsara ny olony (and19)
Fantatr’i Jesoa amin’ny antsipirihany ny momba ny olony araka izay ambaran’i Jaona eto : asa , fitiavana manao ny asa , finoana manosika hiasa , faharetana amin’ny asa. Tsy misy miafina amin’i Jesoa araka izany ny fiainan’ny mpanompony , ny fiainan’ny mino eo am-pijoroana vavolombelona . Andriamanitra mahita sy mahatsapa ny zavatra rehetra tokoa mantsy i Jesoa . Zava-dehibe ho an’ny mino ny mahalala an’izany , satria fantany fa mijery sy tena mahita azy ny Tompony .
2-Mamaly ny olona araka ny asany (and23 )
Mifanaraka amin’ny asa tanterahin’ny olona no valim-pitia azony antenaina avy amin’Andriamanitra . Andriamanitra marina i Jesoa ka mamaly ny olona araka ny ezaka rehetra tanterahiny amin’ny fanompoana Azy. Tsy misy miasa jamba rafozana izany ao amin’i Jesoa . Tsy maintsy hahazo valim-pitia avokoa izay mikely aina tsara avy amin’ny Tompo izy , raha ratsy kosa dia hahazo valiny mifanaraka amin’izany avy amin’ny Tompo koa izy . Raha tsy maintsy hahazo valin’asa avy amin’ny Tompo ihany , aleo miezaka manao asa tsara fa hahazo valim-pitia tsara avy amin’Andriamanitra .
Inona no valin’asa lehibe indrindra omen’ny Tompo antsika ?